NBA 2K14 Apk Download Ho an'ny Android  | APKOLL
NBA 2K14 Apk Download Ho an'ny Android 
Aprily 1, 2022 Janoary 27, 2022 by Reyan Ahmad
Salama ry mpitia basikety, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android mahatalanjona ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe NBA 2K14 Apk. Izy io dia rindrambaiko filokana Android, izay manolotra traikefa filalaovana basikety mandroso indrindra.
Ny NBA dia iray amin'ireo ligy basikety lehibe indrindra eran-tany, izay naorin'i Etazonia. Ekipa telopolo no mandray anjara amin’ity ligy ity, avy amin’ny toerana samihafa. Ireo mpilalao amin'ity ligy ity no atleta tsara indrindra amin'ny sasany amin'ireo karama ambony indrindra. Ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia mitsidika an'i Etazonia mba hijery mivantana ny lalao.
Noho izany, misy mpankafy an-taonany eran'izao tontolo izao amin'ity lalao ity. Misy fampiharana lalao samihafa izay novolavolaina hilalao ity lalao ity, fa matetika, ireo rehetra ireo dia natao ho an'ny PC ihany. Noho izany, ity fampiharana ity dia novolavolaina, izay manolotra ny endri-javatra tsara indrindra azo idirana amin'ny alàlan'ny fitaovana Android anao.
Misy endri-javatra samihafa ao amin'ity rindranasa ity, izay azonao idirana sy alao ny traikefa filokana tsara indrindra. Hizara an-tsipiriany momba azy izahay. Noho izany, raha te hahalala momba azy ianao, alohan'ny fisintomana, dia mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary zahao miaraka aminay ity app ity.
Topimaso momba ny NBA 2K14 Apk Latest Version
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny 2KSports. Manolotra traikefa filokana baskety tsara indrindra amin'ny fampiasana fitaovana Android. Misy mpampiasa Android an-taonina erak'izao tontolo izao, izay misy mpankafy NBA an-tapitrisany koa. Noho izany, amin'ny alàlan'ity rindrambaiko ity dia afaka milalao ny lalao tiany indrindra izy ireo amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
Manolotra fomba maro hilalaovana izy io, ahafahan'ny mpampiasa milalao azy amin'ny Multiplayer ary tokana ihany koa. Amin'ny fomba maro, ny mpampiasa dia afaka manampy mpilalao hafa hilalao azy. Raha te-hilalao amin'ny bots ny mpampiasa, dia manolotra fomba tokana ihany koa izy. Amin'ny fomba tokana, ny mpilalao dia afaka milalao ny lalao amin'ny bots.
Amin'ny lalao dia tsy maintsy mifehy ny ekipa iray manontolo ny mpilalao tokan-tena. Izy io dia hanome fifehezana ny mpilalao, izay eo akaikin'ny baolina. Afaka maka ny baolina amin'ny mpilalao hafa ny mpilalao ary mampita izany amin'ny hafa. Manome ny mpilalao aza izy io mba hanao hetsika samihafa handanjalanjana mpilalao hafa.
Izy io dia manome mpanara-maso lalao marobe, izay ahafahanao milalao azy io amin'ny fomba tena izy. ny Lalao 3D manome ny mpampiasa asa maro, amin'ny alalan'ny baolina ary koa mandalo ny baolina. Mila ao anaty faribolana ny mpampiasa mba hahazoana isa. Izy io dia manome fanaraha-maso, izay ahafahan'ny mpilalao maka ny baolina amin'ny mpifanandrina.
Mila haingana sy mandray andraikitra ianao eo am-pilalaovana azy satria mety ho diso koba ianao ary very ny lalao manontolo. Misy sarimiaina isan-karazany ampiana miaraka aminy, izay azo atao na lalaovina, rehefa resy na nahazo isa. Izy io koa dia manome firaketana lalao, izay ahafahan'ny mpilalao mijery ny isa rehetra indray.
Manome ekipa samihafa izy, izay nofidinao tamin'ny dingana voalohany. Raha vantany vao vita ny ekipa dia azonao atao ny milalao ny fifaninanana ary mandresy azy ireo. Manolotra fomba lalao isan-karazany izy io, izay ahafahanao milalao lalao haingana. Amin'ny lalao haingana dia azonao atao ny manomboka amin'ny filalaovana lalao misy. Tsy misy fiatraikany amin'ny mpitatitra na amin'ny fifaninanana ny lalao haingana.
Misy endri-javatra maro hafa amin'ity lalao ity, azonao zahana. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary manomboka milalao. Raha manana fanontaniana na olana amin'izany ianao dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany ary aza misalasala mampiasa azy.
anarana NBA 2k14
Anaran'ny fonosana com.t2ksports.nba2k14android
Ny sasany amin'ireo fiasa lehibe dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, saingy misy maro hafa. Noho izany, hizara ny lisitry ny fiasa lehibe izahay rehetra. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra.
Maody lalao marobe
Multiplayer azo alaina
Manana rindrambaiko milalao toa anao koa izahay.
Ahoana ny fampidinana NBA 2K 14?
Ny tsimbadika farany dia misy eny an-tsena, saingy sarotra ny mahita azy. Noho izany, hizara rohy miasa azo antoka izahay hampidinana azy. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
NBA 2K14 Apk OBB no fomba tsara indrindra hiainana ny lalao video National Basketball Association amin'ny fitaovanao Android. Noho izany, sintomy izany ary manomboka milalao miaraka amin'ny ekipanao. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny tranokalanay
Sokajy Games, Sports Tags Lalao 3D, NBA 2K14 Apk, NBA 2K14 Apk Latest Version, NBA 2K14 Apk OBB Post Fikarohana
SUNGROW Apk 2022 Download ho an'ny Android [Mahazo vola]
Abstraction Emote Injector Apk Free Download Ho an'ny Android